English Speaking – Job Expressions (17) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
English Speaking – Job Expressions (17) Author: lu bo | 10:42 PM | No မှတ်ချက် | ‎Win Naing Oo‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ
· နောက်ကျသွားပြီး ရောက်သွားတဲ့အခါ ဘယ်လို အမေးခံရနိုင်မလဲ ၊ ဘယ်လိုပြန်ပြောနိုင်မလဲ ၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းချက်ပေးမလဲ စတဲ့ နမူနာပုံစံလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ် ..
. 1. Why are you late? ခင်ဗျား ဘာလို့နောက်ကျတာပါလဲ . 2. Do you haveareason for being late? နောက်ကျနေတဲ့အတွက် ခင်ဗျားမှာ အကြောင်းပြချက် ရှိပါသလား
. 3. Sorry I'm late. Traffic was unusually bad today.
၀မ်းနည်းပါတယ် ကျနော်နောက်ကျသွားပါတယ် ၊ ဒီကနေ့ မီးပွိုင့်တွေက ထုံးစံအတိုင်း မဟုတ်ပဲ ဆိုးနေခဲ့ပါတယ် ။ (မီးပွိုင့်မှာ ပုံမှန်ထက်ကြာနေခဲ့လို့ပါ) . 4. I apologize for being late. I had to drop off my wife at work. It took longer than I thought.
နောက်ကျနေတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် ၊ ကျနော့်မိန်းမကို သူ့အလုပ်မှာ ပို့ပေးနေခဲ့ရလို့ပါ ၊ အဲဒါက ကျနော်ထင်ထားခဲ့တာထက် အချိန်ပိုပြီးယူ သွားခဲ့ပါတယ် ။ . 5. I hadadentist appointment this morning and it was longer than I expected. ကျနော့်မှာ သွားဆရာဝန်နဲ့ ချိန်းဆိုထားတာ တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ် ပြီးတော့ အဲဒါက ကျနော်ထင်ထားခဲ့တာထက် ပိုကြာသွားခဲ့ပါတယ် ။ . 6. I'm sorry for being late. I got stuck in every light this morning. နောက်ကျနေတဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းပါတယ် ၊ ဒီမနက် မီးပွိုင့်တိုင်းမှာ ကျနော် ပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ် . 7. You have been late three times in the last two weeks. Is this going to beacontinual problem?
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းနှစ်ပတ်မှာ ခင်ဗျား သုံးကြိမ်နောက်ကျ ပြီးပြီ ၊ ဒီဟာက ဆက်ဖြစ်နေမယ့် ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာမလား (ဒီလိုပဲ မကြာခဏ နောက်ကျနေမှာလား)
( Continuous နဲ့ Continual ကွာခြားချက်မှာ .. Continuous က ကြားမှာ အချိန်မခြားပဲ ဆက်တိုက်ဖြစ်တာ ၊ Continual ကလည်း ဆက်တိုက်ဖြစ်တာ ပေမယ့်လို့
ကြားမှာ အချိန် ခြား..ခြားပြီးမှ ဖြစ်တာ ၊ အခုဒီမှာ သူက နေတိုင်းနောက်ကျတာ
မဟုတ်ပဲ ရက်ခြားပြီး နောက်ကျတဲ့ သဘောဖြစ်တယ် ၊ ဒါကြောင့် Continual ကိုသုံးတာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ နောက်တစ်ခုကတော့ continual ဟာ စိတ်ညစ်ညူးစရာ သဘောကိုလည်း ဆောင်တယ် ၊ ကောင်းတဲ့ နေရာတွေမှာ သိပ်မသုံးပါဘူး ) . 8. You had better start managing your morning time better. ခင်ဗျားရဲ့ မနက်ခင်း အချိန်တွေကို ပိုကောင်းအောင် စတင် စီစဉ်သင့်တယ် (မနက် ရုံးစောစောရောက်အောင် အစီအစဉ် စလုပ်ပါ ) . 9. I expect you to be at your desk at eight o'clock. Do you haveaproblem with this?
ကျနော် ခင်ဗျားကို (၈) နာရီမှာ ခင်ဗျားရဲ့စားပွဲမှာ ရှိနေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ၊ အဲဒီအတွက် ပြဿနာရှိပါသလား ( ၈ နာရီမှာ စားပွဲကိုရောက်နေစေချင်တယ်) . 10. I am sorry. It won't happen again. ကျနော် ၀မ်းနည်းပါတယ် ၊ အဲဒါ ထပ်ဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး . 11. I am very sorry. I will not be late again. ကျနော် အလွန် ၀မ်းနည်းပါတယ် ၊ ကျနော် ထပ်ပြီး နောက်ကျမှာ မဟုတ်ပါဘူး …………………………….. ကဲ မကြာမကြာလည်း နောက်ကျ မနေကြနဲ့ဦးနော် ၊ တစ်ခါတလေ ကိစ္စရှိလို့ နောက်ကျတယ်ဆိုလျှင်လည်း ဒါလေးတွေ နမူနာယူပြီး ပြောကြပေါ့နော.. . မေတ္တာဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့